Lviv - Isifundo e-Ukraine. Ukrainian Ukwamukelwa Center
Lviv yidolobha eliyingqayizivele lapho kulotshwe khona ngomlando, isiko, sengqondo emihlabeni emibili - eMpumalanga naseNtshonalanga - basuke tolerantly ahlanganisiwe. Kuyathakazelisa ukuphawula ukuthi Umuzi uyizinhlangothi at ibanga elilinganayo kusuka eCrimea (noma, ikakhulukazi, umuzi ka Theodosia), zangaphambili medieval Kafa, futhi Venice. Ngokusobala, indawo Lviv sika ezindawo ezimpambanweni zomgwaqo amasiko global nempucuko uye wathonya nomkhathi wawo inimitable. Naphezu ukuhlupheka okuningi silethwe nezimpi eziningi kuzo emakhulwini eminyaka edlule omude Lviv sika, yaba ingqopha yezakhiwo zaleli dolobha wahlala cishe yayinjalo.
Lviv iyisikhungo lesifunda esikhulu, owawuhlala endaweni yase 155 sq. kilometers. mayelana 730,000 Abantu lihlale phakade Lviv. Iningi labantu kulo muzi sakhiwe Ukraine ethnic, Nokho neminye imiphakathi ezifana nabasePoland, amaJuda, amaGreki, amaJalimane, Armenia, amaRashiya, njll. emelwe.
Lviv lingumuzi abafundi. mayelana 150,000 abafundi ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme nge anhlobonhlobo specialisation. Ngokusho imibono yomphakathi ngezinhloko, Lviv singesesibili umuzi ethandwa kakhulu e-Ukraine ngemva dolobha yawo iJerusalema - Kyïv. Kusukela ngoDisemba 1998, ngumgogodla lo muzi ehlanganisiwe efeni zamasiko nezomlando of UNESCO. 20% bazo zonke zibona lezi zindawo yezakhiwo akhiwe e Lviv.
Lviv kuyinto evulekile Museum kanye samuntu isiko Ukrainian nento European, panorama ongenakulibaleka, kanye izikhumbuzo eyingqayizivele bokwakha, amasiko ezindala futhi, ngokuqinisekile, ikhofi enongiwe in the edume Lviv ikhofi izindlu. Izivakashi ziya okungenazinkinga by emkhathini okhethekile sokuzola ngokubabazekayo Arkelawu emzini futhi izihambi wesilisa abatelekile of habitants wendawo.
Lviv lingumuzi amayunivesithi eziningi ezindala, izikhungo eyingqayizivele zesayensi kanye ezinqolobaneni, nemitapo odumile neminyuziyamu. Ungakwazi ukungcebeleka mayelana ezitaladini ethule, ngaso sonke isikhathi lapho ngithola okuthile okusha bese ezithakazelisayo ngokwakho.